सदरमुकामकै पसलहरुमा मूल्यसूची छैनन, चाडबाडमा उपभोक्ता ठगिने चिन्ता | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
सदरमुकामकै पसलहरुमा मूल्यसूची छैनन, चाडबाडमा उपभोक्ता ठगिने चिन्ता
Published On : १२ आश्विन २०७७, सोमबार ०६:५५
गोरखा सदरमुकामका पसलहरुमा मूल्यसूची नै नभएको पाइएको छ । गोरखा नगरपालिकाले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलमा मूल्यसूची नभेटिएको अनुगमनमा खटिएका प्रशासकीय अधिकृत चेतप्रसाद अम्गाईले बताए ।
‘अधिकांश पसलमा मूल्यसूची छैन, भएको केही पसलहरुमा अद्यावधिक भएको छैन’ उनले भने । चाडबाडका बेला ग्राहकको चाप धेरै हुने खाद्यान्न पसलहरुले मूल्यसूचीमा ध्यान दिएका छैनन् । अनुगमन आएका बेला मुल्यसूची हेर्ने भएकाले ब्यपारी ब्यवशायीले सूचीको तुल मात्रै टाँगेर राखेका छन् । धेरैजसो पसलमा अहिले लेखिएको मूल्यसूची अनुसार सामग्री खरिद गर्न पाईँदैन । कुनैको मूल्य धेरै, कुनैको थोरै छ ।
आईतबार गोरखा नगरपालिकाले सदरमुकामका २१ वटा पसलको अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा १४ वटा पसल नगरपालिकामा दर्ता नभएको भेटिएको अधिकृत अम्गाईले बताए । चारवटा होटल, १४ वटा किराना, दुई वटा मासुपसल र एउटा ग्यारेज अनुगमन गरिएको थियो । अधिकांश किराना पसलमा म्याद गुज्रिएका पेय पदार्थ फेला परेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
नगरपालिका नजिकै रहेका पसल पनि दर्ता भएका छैनन् । ‘ब्यस्त बजारमा रहेको पसल पनि ब्यवस्थित छैन’ अधिकृत अम्गाईले भने ‘दर्ता गर्न, सरसफाईमा ध्यान दिन सुझाब दिएका छौँ ।’ एक हप्ताको सयम दिएर सुधार गर्न अनुरोध गरेको उनले बताए । चाडबाड नजिकिएसँगै गोरखा नगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिएको छ ।